Unogona taona scariest uye hasha shanduro King Kong mumafirimu uye vemungano dzino. Asi zvakadini kana mukuru uye ane simba Kong anozova zvechokwadi kusetsa uye vanofadza pfungwa dzenyu? tsime, kuti ndizvo chaizvo King Kong Cash akachengetera iwe. izvi itsva cheap car insurance bhonasi paIndaneti mutambo yakaitika colour rakaisvonaka katuni Style kwemasango. Unogona kuona dombo cheya kana kutoti chigaro apo Mambo Kong akagara aine korona mumusoro wake. Iye kumutsa sezvinoita mambo nomusango asi chaizvoizvo kusetsa mukomana ari mutambo uyu. Vamwe zvechokwadi inotonhora akachangamuka uye bhonasi mamiriro, wava nechokwadi kuwira kudanana mutambo uyu. Kutamba, unofanira kusarudza kwako vachitamba mari pose kubva £ 0,10 kusvika £ 500 neimwe kuruka.
Pamusoro yokuvaka raMambo Kong Cash
Izvi nemaziso dzinokatyamadza itsva cheap car insurance bhonasi paIndaneti mutambo yakanga yakataurwa Blue Print. Mumwe musoro Developers munyika paIndaneti dzokubhejera. Vane pamusoro gumi ruzivo mukusika munhu muboka siyana mitambo rabatsira vanhu kuti zvimwe monies chaiyo.
From muchidimbu, game anotarira hunoshamisa dzomutambo Graphics uye yepamusoro ekuteerera-video inowanikwa. The zviratidzo mumutambo vane mavara chaizvo uye kupa kuchangamuka pamusoro kuhwina. Ndivo mutambo Logo, chihwenga, ingwe, chipembere uye garwe. The Logo inopa pamusoro mari kuti 500x pamusoro mashanu nemarudzi kumhara pamusoro Gwenzi. Rezasi ukoshi zviratidzo izvi itsva cheap car insurance bhonasi paIndaneti mutambo vari kutamba makasa kubva J kusvika A. Pane vaviri bhonasi zviratidzo vari mhuka uye vari anomiririrwa mambo Kong uye remuti dhiramu.
Wild Symbol: Upfu inomirira ichi yomusango itsva cheap car insurance bhonasi paIndaneti mutambo uye vakafukidza vose dzakakudzingai mambo hongkong. Vachaonekwa ose Gwenzi mashanu uye shanu kwayo kumhara kunyange anokupai 500x ari padanda yako.
King Kong Pararirai: Mambo Kong chiratidzo ndiye uparadzire chepfungwa mutambo uye nhatu kana kupfuura izvozvo inokinura bhonasi zvinhu. Pane ina dzakasiyana bhonasi zvinhu uye uri randomly paakavapa mumwe wavo. Inosanganisira vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso, multipliers uye siyana jackpot zvisamumirira. At bhonasi pamwero, uri kunyange akabayira bheja chinhu kuti unogona kushandisa.
Ichi chimwe chezvinhu kunakidza itsva cheap car insurance bhonasi paIndaneti pamwe hunoshamisa Graphics uye ruzha. Pane vazhinji bhonasi zvinhu kukubatsira kuita zvimwe mibayiro akanaka pamwe shoma rombo Muruoko rwake anobata chirukiso.